Ogaden News Agency (ONA) – Shirwaynihii faraca Muftaaxul Xoriya oo lagu qabtay xerada Ifo
Shirwaynihii faraca Muftaaxul Xoriya oo lagu qabtay xerada Ifo
Maalinnimadii ay taariikhdu kubeegnayd 19/04/2013 waxaa xerada ifo ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay shirwaynihii faraca Muftaaxul xoriya ee ka howlgala xerada Ifo. Shirkan oo ah shir sanadkiiba mar laqabto ayaa lagu doortaa maamul cusub oo badala maamulkii 12kii bilood ee lasoo dhaafay shaqada soo waday waxaana lagu eegaa waxqabadkii sanadkii tagay isla markaana lagu dajiyaa ajandihii lagu howlgali lahaa sanadka soo socda hadii alle idmo.
Shirka ayaa furmay abaare 2:30 duhur nimo waxaana shirka furay islamarkaana qaybta hore ee shirka hagayay gudoomiyihii hore ee faraca mudane Kaamil. Shirka waxaa sidii caadada ahayd lagu bilaabay aayado qur’aan ah iyo wacdi diini ah. ka dib waxaa makaroofanka lagu soo dhaweeyay halgame Cabdi carab oo kamid ah odayaasha faraca Muftaaxul Xoriyo oo kudbad dhinacyo badan taabanaysay madasha shirka kasoo jeediyay isagoo ka warbixiyay guud ahaa arimaha quseeya qoxootiga S.Ogadenia ee ku jira Dhadhab, wuxuuna ka shanqadhiyay qorshayaasha UNHCR ee ku aadan qoxootiga Ogadenia sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka u gaarka ah.
Intaakadib waxaa shirkii lagu wareejiyay gudigii farsamada oo uu gudoomiye ka’ahaa halgame Axmad luul. Gudiga ayaa sifiican usoo qorsheeyay qaabka doorashada waxayna ku bilaabeen khudbado ay dadku ugu sheegayeen qaabka ay doorashadu u dhacayso iyagoo wacyi galin ka dib bilaabay in lagudo galo doorashada waxaana goobta lagu doortay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Sheikh C/raxmaan oo kamid ah kaadirka faraca.
Guntii iyo gaba gabadii wuxuu shirka ku bilowday kuna dhamaaday jawi dagan oo farxadeed. Waxaa soo xidhay gudoomiyaha cusub ee faraca Muftaaxul xoriyo sheikh C/raxmaan oo kudbada gaaban oo qiimo badan ka soo jeediyay madasha, isagoo u mahadnaqay gudigii hore, kuna balan qaaday inay meesha ka sii wadayaan hawlaha qabyada ka ahaa jaaliyadda.